Mitengo uye kuwanikwa kweApple Watch Series 3 muSpain | Ndinobva mac
Mitengo uye kuwanikwa kweApple Watch Series 3 muSpain
Chimwe chigadzirwa chinonakidza icho chakaratidzirwa muApple keyword pasina mubvunzo kuvandudzwa kweApple Watch. Izvo zvine musoro kuti vashandisi vane iyo Series 2 modhi yeApple Watch havasi kufunga nezvekuchichinja, asi Ehe, avo vane yekutanga 2015 modhi kana Series 1 vanogona.
Apple inotora nhanho kumberi muchishandiso nekuwedzera kubatanidza kweLTE uye iro runyerekupe rwekutanga rwakayambira nezve kuunzwa kwemafoni asi kungoagamuchira kunorambwa. Iyo nyowani Apple Watch Series 3 ine rusununguko rwakazara rwekugamuchira uye kufonaEhe, muSpain parizvino hapana chekuita cheiyi modhi neLTE yekubatanidza.
Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti isu pakupedzisira tichawana mhinduro kubva Siri zvinonzwika uye barometric altimeter yatakaona mune mamwe madhijitari eiyo mhandoIzvi zvinoreva kuti mune nyowani Apple modhi inoisa nyama yese pane iyo grill. Semazuva ese muApple Watch isu tine maviri masizi aripo -38 uye 42 mm- kuwedzera kune yakasarudzika edition Nike, iyo zvakare yakavandudzwa.
1 Apple Watch Series 1 mutengo
2 Apple Watch Series 3 mutengo
3 Kutanga kwekuchengetedza uye kutengesa
Apple Watch Series 1 mutengo
Muchiitiko ichi, mutengo weApple wearable unodzikira zvishoma kana uchienzaniswa neakapfuura. Nenzira iyi iyo Apple Watch Series 1 inogara pa269 euros yeiyo 38mm modhi uye 299 euros yeiyo 42mm modhi, mitengo inokwezva chaizvo kune avo vasingade pekugara kumvura kana GPS.
Apple Watch Series 3 mutengo
Iyo itsva Apple Watch ine mutengo unowanikwa. Vakomana vanobva kuCupertino vakagadziridzwa kusvika pakakwirira uye votenga zana maeuro kupfuura iyo Series 100 yataurwa pamusoro, vakasara mukati 369 euros yeiyo 38mm modhi uye 399 euros yeiyo 48mm modhi. Mune ino kesi kana isu tichishora mvura kusvika pamamita makumi mashanu, iyo barometric altimeter uye inokurumidza processor. Nike mhando dzine mutengo mumwe chete.
Kutanga kwekuchengetedza uye kutengesa
Iyo itsva Apple Watch inogona kuchengetwa kubva Chishanu chinotevera Gunyana 15 uye ichave ichiwanikwa kuti utenge kubva Chishanu 22 wemwedzi mumwe chetewo. Mune ino kesi tinogona kuti ivo havana kunonoka sezvinoitika neiyo iPhone X uye mumazuva mashoma ivo vanozove varipo.
Kunongedzera uye parutivi kwakakodzera iyo modhi yakaziviswa chaizvo muApple kiyi uye ndiyo Iyo Apple Watch Series 3 ine LTE haina mutengo kana kutanga zuva kuSpain. Misangano nevashandisi nevamwe ingangodikanwa kuti itange kushambadzira, ko kana ichiita seinonakidza ndeyekuti mutengo weizvi unosara wakafanana newemamwe ma Series Series matatu sezvo mutengo waro uri madhora ari 3 uye 329 zvichiteerana. Tichaona kuti kutengwa kweiyo "chaiye" modhi nyowani yatinoda tese kunoguma kuSpain
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mitengo uye kuwanikwa kweApple Watch Series 3 muSpain
Apple inotangisa mahedhifoni matsva, iyo urBeats3
iTunes inogadziridzwa nekubvisa zvese zvisaririra zveApp Store